अमिट यादहरु (सुमन श्रेष्ठ) Coming Up Next » हाम्रो सम्पुर्ण प्रसारण बन्द
Feature 123456... › » स्थानिय तह पुर्नसंरचना अबको बाटो	नुतन श्रेष्ठ, सोलु समाचार साप्ताहिक
राजनीतिक बृत्तमा लोकतान्त्रिक अभ्यास चलि रहेपनि देशको कुना कन्दरामा भने अहिले स्थानिय तह पुर्नसंरचनाले तातो रुप लिएको छ । देशले ३९ औं प्रधानमन्त्री पाईरहँदा जिल्ला जिल्लामा स्थानिय तह पुर्नसंरचनाले चर्चा पाईरहेको छ ।	नापतौलका लागि ढक तराजु पाएपछि व्यापारीहरुलाई सहज ।	जेष्ठ ३१ सोमबार, सोलुखुम्बु, पशी शेर्पा सोलुखुम्बु जिल्लाको धेरै नागरिकको आम्दानीको स्रोत कृषि हो । किसानहरुले विभिन्न किसिमको खेती लगाएर उब्जाउ गरी वेचविखन गरी आम्दानी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय तरकारी खेति गर्नेको संख्या बढ्दो छ ।	पाठ्यपुस्तक समयमै आपुर्ति हुनुपर्छ	सोलु एफएम, सोलुखुम्बु । शैक्षिक सत्र २०७३ शुरु भईसकेको छ ।	बेपत्ता व्यक्तीको छानविन अझै अन्यौलमा	“मेरो मात्र भन्थे धेरैका छोरा वेपत्ता भएका रहेछन्, हुनेको त हराउने होनि नहुनेको के हराउँछ” ....
हरि शरणम् ! अव पिर कम भयो । यो हो बेपत्ता छोराकी आमाको भनाई ।	हरेक कार्यक्रममा ढिलाई	माया शेर्पा/सोलु एफएम- सोलुखुम्बुमा त्यस्ता सायदै कार्यक्रम होलान्, जो समयमा शुरु भएर तोकिएकै समयमा सकियोस । कतिपय कार्यक्रम शुरु गर्न तोकिएको समयभन्दा २/४ घण्टा नै ढिला हुन्छ भने कहिं कतै तोकिएको समय आसपासमा शुरु भएपनि २/४ घण्टा बढि लम्बिन सक्छ ।	२८ बर्षपछि गाउँभरी खुशीयाली	१६ साउन २०७२/सोलु एफएम- सोलुखुम्बुको अत्यन्तै बिकट गाउँ मैलीबासीमा यसबेला खुशीयाली छाएकोछ । गाउँका एक÷दुई घर हैन पुरै गाउँका बासिन्दाहरुमा एकै किसिमको खुशीयाली छाएकोछ । त्यो खुशी हो, आफ्नै जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता हुनु ।	दर्जी दाई टालटुलमा सिमित	विवश कुलुङ
गाउँ बस्तिसम्म सिलाईकटाई तालिम लिएका सुचिकारहरु टेलर्स खोलेर व्यवसाय गर्न थालेपछि परम्परागत रुपमा हाते मेसिन चलाएर कपडा सिउने कालीगडहरुको पेसा संकटमा पर्न थालेकोछ ।	पहिलीलाई पहिरोले लग्यो, दोस्रीलाई जारले	भीमबहादुर बस्नेत
मेरो घर रामेछाप जिल्लाको बाम्ती भण्डार गाविस वडा नं १ मा पर्छ । जुन गाउँ सोलुखुम्बुको चौलाखर्कबाट वारीपारी पर्छ । म हाल वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा कार्यरत छु । हामी सानैदेखि दुःख गरेर हुर्किएका हौं । पहाडको बसाइ, बिहान उठेपछि घाँस दाउरा	सुध्रदै गुदेल	डिबि खालिङ
सुंगुरको खोरमा दिसा गर्ने गाविस भनेर परिचित सोलुखुम्बुको दुर्गम गाविस गुदेल अहिले सरसफाईको दृष्टिले जिल्लाकै अग्रपङतीमा छ । जिल्लाकै पहिलो खुल्ला दिसामुक्त गाविस अनी पहिलो खुल्ला पलाष्टिक मुक्त गाविसको पहिचान बनाएको गुदेलमा अहिले त्यहाँका बसिन्दाहरुको सरसफाई सम्बन्धि बानिव्यवहार पनि सुधार भईरहेकोछ ।	‘धन भन्दा मनको गरिव’	उत्तम पराजुली,
मान्छेले कतिपय अबस्थामा धन नभएकोले बाध्यताका कारण कुनै काम गर्न सक्दैन, चाहेर पनि धन छैन भने काम रोकिन सक्छ । तर कतिपय अबस्थामा धन भन्दा मनको गरिवीको कारण पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको पाईन्छ । यसको उदाहरण हो, जिल्लाको खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान ।	Recent News
कालापत्थरबाट सगरमाथा हेर्दा लोभलाग्दो उचाई सोलुमा पौडिन थाले ट्राउट शिक्षक मृत फेला देवी उत्पत्ती गराएको विश्वासमा सयौंको भिड (फोटो फिचर) राष्ट्रनिर्माणमा युवाहरुको भूमिका लेकको आलु र औलको खुर्सानी फाटेको मन सन्तोष पन्तकी छोरी किन आक्रोशित ? जीवनबाट नहारौं, संघर्षबाट नहारौं, जीवन भनेकै संघर्ष हो । कस्तो विकास ? कसरी विकास ? अनेरास्ववियू सोलुखुम्बुको १० औ जिल्ला अधिवेशन तयारी तिव्र Solukhumbu News